Xoghayaha Guud Xisbiga UDUB diidey ka qaybgalka dood saddexda xisbi ay ku martiqaadday hay’adda IRI | Somaliland.Org
September 30, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Dood uu qabanqaabiyey xafiiska Mac-hadka IRI (International Republican Institute) ku leeyahay magaalada Hargeysa oo uu ku talagalay inuu isugu keeno saddexda xisbi Qaran iyo saxaafadda ayaa qabsoomi kari weydey labadii habeen ee Isniintii iyo Salaasadii, kadib markii Xoghayaha Guud ee xisbiga UDUB uu diidey inuu dooddaas kala qaybgalo xubno ka socda hoggaanka labada xisbi ee mucaaridka ah.
Doodda oo uu machadka IRI ugu talagalay in saddexda xisbi saxaafadda horteeda kaga dooddaan Diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo aragtiyaha ay ka qabaan, waxa loo qorsheeyey oo lagu martiqaaday laba Guddoomiyekuxigeen oo ka kala socda labada xisbi ee Mucaaridka, UCID iyo KULMIYE iyo Xoghayaha Guud ee xisbiga UDUB, waxayna ballantu ahayd in habeenkii Isniinta ee aynu soo dhaafnay ay isugu yimaaddaan Hotel Maansoor oo dooddaasi loo goleeyey. Hase yeeshee, waxa gooyey oo ka baaqday ballantaas Xoghayaha Guud ee xisbiga UDUB, Maxamed Ismaaciil Bullaale, iyada oo labada xisbi ee mucaaridka ah ay u soo diyaariyeen dooddaas Guddoomyekuxigeenka 1aad ee xisbiga KULMIYE, Muj. Muuse Biixi Cabdi iyo Guddoomiyekuxigeenka 2aad ee xisbiga UCID, Aadan Maxamed Mire (Waqaf), waxana beddelkiisa madasha yimi xubno ka tirsan xisbiga UDUB oo uu hoggaaminayo nin magaciisa la yidhaahdo Cumar Jaamac Faarax oo ka tirsan Guddida Fulinta xisbigaas, kuwaas oo ku dooday inay iyagu metelayaan xisbiga, doodana uga qaybgelayaan, taasna waxa ganafka ku dhuftay hoggaanka labada xisbi ee mucaaridka ah oo sheegay in aanay dood la gelayn cid ka hoosaysa Xoghayaha Guud ee UDUB.
Labada Guddoomiyekuxigeen ee labada xisbi, Muj. Muuse Biixi iyo Aadan Waqaf, waxay ku doodeen in dhiggooda xisbiga UDUB uu yahay Madaxweynekuxigeenka oo ah Guddoomiyekuxigeenka xisbiga UDUB, isla markaana iyaga oo tixgelinaya xilka qaran ee uu hayo ay aqbaleen Xoghayaha Guud aanay aqbalayn cid ka hoosaysa inay la fadhiistaan. Waxaana sidaa lagu baajiyey dooddii habeenkii Isniintii, iyada oo IRI mar kale u qortay Xoghayaha Guud ee xisbiga UDUB inuu ka soo qaybgalo dooddaas oo loo ballamay habeenkii Salaasadii ee xalay.
Hase yeeshee, mar kale ayaa Xoghayaha Guud ee UDUB u soo diray dooddaas Cumar Jaamac oo uu u soo qoray warqad rasmi ah uu ugu wakiishay dooddaas, taas oo ay mar kale ku gacan saydheen masuuliyiinta labada xisbi ee mucaaridka ah. Waxayna soo jeediyeen in doodda la qabto iyada oo uu bannaan yahay kursiga Xoghayaha guud ee UDUB, ummaddana loo sheegayo in xisbigaasi ka baaqday dooddaas.
Hay’adda IRI ayaa la sheegay inay isku dayday inay arrinta maslaxad ku dhammayso, balse, way ku guuleysan weydey, waxana lagu kala dareeray markii la isku mari waayey. Waxayna u muuqataa in dooddaasi fashilantay.
Xisbiga UDUB iyo Xukuumadda Riyaale ayaan ogolayn inay dood ku wajahdo xisbiyada mucaaridka ah. Waxayna wararku sheegayaan in Xisbiga UDUB uu u hanjabey hay’addaas haddii ay isku daydo inay qabato dooddaas oo kursiga UDUB uu bannaan yahay.
C/risaaq M. Dubbad, Somaliland.org, Hargeysa,